Sanduuqa adag, Sanduuqa Baakadaha, Sanduuqa Hadiyada - Hanmo
Ku dhiirrigeli xiisaha ku saabsan farshaxanka muuqaalka ah oo ku raaxee.
Si loo soo bandhigo loona tarjumo shaqooyinka farshaxanka oo leh tayo sare iyo muhiimad taariikhi ah,
Anaga shaqo abuur ahaan waxaan taageeri karnaa OEM, ODM iyo R & Dsolution.
Waxaan hubineynaa inaan siino wax soo saarka iyo adeegga ugu tayada fiican dhammaan wada-shaqeeyeyaashayada.
Iyada oo la soosaarayo tiro taas oo ka dhigaysa taariikhda dhalmada si aad u gaaban.
Tan iyo 2010, Hanmo waxay u taagan tahay hal-abuur iyo tayo. Waxaan bixinaa xalka xirxirida hal-joojinta ee baakadaha raaxada iyo daabacaadda alaabada. Waxaan si qoto dheer u ognahay in si aad uga dhex muuqato muuqaalka macaamiisha maanta, waa inaad gaartid "qodobka wow". In ka badan 10 sano oo u heellan, Hanmo waxay ku faantaa awooddeena hal-abuurnimo si ay u soo jiito dareenka macaamiisha.
Ka shaqeynta dusha sare
Tayada Wanaagsan Shiinaha Tayada Sare High ...
Maalmo ka hor, Ruushka wuxuu helay wax soo saar cusub oo Lego Star Wars ah. Shayga ku jira sanduuqa hadiyadu waa mid dahsoon, laakiin waxay umuuqataa inuu yahay sanduuq gaar ah oo uu naqshadeeyay bakhaarka la aqoonsan yahay ee LEGO ee wadashaqaynta ...
Waa maxay habka loo qaabeeyo adiga ...
Baakadaha sumadaha gaarka loo leeyahay ayaa noqda oo muuqaal caadi ah maalmahan, laga bilaabo shirkad weyn illaa ganacsi yar, dhammaantood waxay rabaan inay dhisaan sumcad shirkadeed iyaga oo adeegsanaya baakadeynteeda. Sida baakadu ay tahay ea ...
Haddii baakadaadu ay tahay mid baaba'aya ama eco ...
Eco-friendly hadda waxay noqoneysaa isbeddel, dad aad iyo aad u tiro badan ayaa daneynaya maalinba maalinta ka dambeysa, maadaama aan wajaheyno kor u qaadista masiibooyinka ay sababaan burburka dabeecadda annaga. Anaga ahaan, sida soo saaraha pac ...
Sida Loo Sameeyo Sanduuqa Soo Jiidashada
Baakaduhu waxay u jiraan difaac ahaan badeecada gudaha ah, hase yeeshe, horumarka dhaqaalaha adduunka, baakaduhu waa inay ku daraan qiime dheeri ah. Si aad uga dhex muuqato muuqaalka macaamiisha maanta, waxaad ...